သေခြင်းတရားကို အမြဲသတိရနေရင်…. – Tameelay
သေခြင်းတရားကို အမြဲသတိရှိနေတော့ နေခြင်းတရားမှာလည်း
Credit Tthaw Thaw
သခွေငျးတရားကို အမွဲသတိရှိနတေော့ နခွေငျးတရားမှာလညျး
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြော်ဖို့ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါ
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြော်ဖို့ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါ ကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် …
လာဒ်တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်းမကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင် တို့လို တန်းလန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်လိုသူများ အတွက်အလွန်တရာမှ လာဒ်ရွှင်စေသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…. …
ယနေ့ခေတ်ကာလ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ စိတ်မချမ်းသာစရာသတင်းများ မြင်တွေ့ရတယ်။ အဖိုးက မြေးကို မုဒိန်းကျင့်တာ၊ ဦးလေးက တူမကို မတရားကျင့်တာ၊ အဖေက သမီးကို အဓမ္မကျင့်တာ၊ ညီက အကိုကို သတ်တာ၊ လင်က မယားကို သတ်မိတာ စသည်ဖြင့် နားမချမ်းသာစရာ ရှက်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွားနေတာကို မြင်ရ၊ ကြားရ၊ …